Indonezia: Rehefa ny vehivavy no mifehy ny fampiasam-bolany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jolay 2010 8:12 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Português, Italiano, 繁體中文, 日本語, 简体中文, Español, русский, English
Nahavita nifehy ny krizy ara-toekarena farany teo i Indonezia ary afaka mifaninana amin'ireo firenena ao anatin'i BRIC mihitsy aza izy amin'izao fotoana izao. Fa inona ary no mety ho tsiambaratelon'io firenena faran'izay betsaka vahoaka Silamo eran-tany io ? Maherin'ny antsasaky ny vahoaka 230 tapitris ao Indonezia no vehivavy.
Milaza ireo tatitra nivoaka tamin'ny 2008 avy amin'ny Birao Indoneziana misahana ny Antontan'isa fa misy eo amin'ny 46-49 tapitrisa ny Orinasa Kely sy Madinika ary Salantsalany (MSME) any Indonezia, ary 60_80% amin'izy ireny no an'ireo vehivavy . Maneho ny 97.1% n'ny hery miasa amin'ny firenena ireo MSME ireo .
Mitovy amin'ireo vehivavy ao Afrika na ao Azia Atsimo, misedra zavatra sarotra ihany koa ireo vehivavy Indoneziana , toy ny fahazoana findramam-bola amin'ny banky tsy mila lehilahy ho mpiantoka , na ihany koa rehefa tsy afaka mampiseho fa azo atokisana hahaverim-bola ry zareo .
Manazava ao amin'ny blaoginy i Son Haji Ujaji [id], mafana fo mipetraka any Tangerang, Atsinanan'i Java, hoe ahoana ny fahaizan'ireo vehivavy mampitombo ny fidiram-bolan'ny fianakaviana :
Ny Koperasi (koperativa), rafi-pitantanan-draharaha natsangan'ny vondron'olona iray, tantanina amin'ny fomba demokratika ary manana tanjona ho an'ny tombontsoan'ny rehetra dia raisina ho iray amin'ireo fototry ny toekarena Indoneziana .
Hita hoe efa tafiditra lalina anatin'ny sain'ny vahoaka ireo hevitra fototry ny Koperasi nandritry ny taona maro. Lazaina ho làlana lehibe iray mampidi-bola ihany koa eo an-danin’izay ny Multi Level Marketing (MLM), na dia tsy mitovy lanja amin’ny Koperasi aza izy raha ny fahalalana ny maha-zava-dehibe ny fiarahamonina sy ireo tambajotra. Tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha amin’ireo fihaonan’ny MLM ny vahoaka raha hividy zavatra, mamonjy ny tambajotra izy ireo , mba ahita zava-baovao tsara na fiaraha-miasa ara-barotra sady miresaka no mihinana dité sy mofomamy.
Mitsikera ny lahatsoratra niseho tamin’ny Stanford Social Innovation Review ny mpampiasa aterineto iray antsoina hoe salman_taufik . Manana fihevitra tsara iray mikasika ny antony tsy nampahomby tantaran'ny fampindramam-bola madinika any Indonezia izy:
Manazava i Anna Antoni, mpikambana amin'ny Kiva mipetraka any Bali :
Hita ihany koa ity lahatsoratra ity ao amin'ny ao amin'ny Resadresaka Hanatsarana ny Tany an'ny UNFPA izay ahitana an’i Carolina mampiaina ny live-blog iray momba ny fitantanan’ny vehivavy ny orinasa, ny risim-pony, ny fampiasam-bola (manerantany) mandritry io herinandro ho avy io. Iangaviana ianao hizara eto ireo tetikasanao, ireo rohinao sy ireo traikefanao.